'Fihetsika tsara sitra-po' ho any Gresy: nanolo-tena an'i Alexander ny Seranam-piaramanidina Lehibe i Makedonia
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » 'Fihetsika tsara sitra-po' ho any Gresy: nomen'ny Makedonia anarana hoe Alexander Airport (Great Airport)
'Fihetsika tsara sitra-po' ho any Gresy: nomen'ny Makedonia anarana hoe Alexander Airport (Great Airport)
Aprily 3, 2018
Namerina ny anarana hoe seranam-piaramanidina iraisampirenena, izay nantsoina taloha hoe Alexander the Great, i Makedonia ho fiantrana an'i Gresy mpifanila vodirindrina aminy.
Ny consortium Tiorka TAV, izay miasa amin'ny seranam-piaramanidina, dia nanala ireo litera telo metatra nanoratra ny anaran'ilay mpanjaka mpiady taloha tamin'ny volana febroary, ary nisolo azy ireo tamin'ny talata tamin'ny teny hoe "Skopje International Airport".
Nifandona nandritra ny am-polony taona maro i Gresy sy i Makedonia noho ny anaran'ny repoblika Yugoslavia teo aloha.
Nilaza i Athens fa midika fitakiana faritany any amin'ny faritany avaratra misy azy io ihany.
Ny governemanta mpandala ny nentin-drazana teo aloha dia nanangana tsangambato marobe ho an'i Alexander ary nanome ny làlambe sy seranam-piaramanidina lehibe ho azy, ary nahatezitra an'i Gresy izay nahita azy io ho toy ny fakana ny tantarany taloha.
Ny tsy fahombiazan'ny solosaina dia manemotra ny antsasaky ny sidina voalamina manerana an'i Eropa
Maty ny mpitifitra voarohirohy tao amin'ny YouTube